Yiziphi imibuzo ezivame ukucatshangelwa ukucinga izinjini?
Imibuzo ye-search engine noma imibuzo yimizwi noma imishwana abasebenzisi abathintekayo bethinta ebhokisini lokusesha ukuze bazuze kakhulu emiphumeleni yabo yosesho yombuzo. Imibuzo yosesho ingahlukaniswa ngezigaba ezintathu eziyinhloko - ukuhamba ngezinyawo, ulwazi kanye nokuthengiselana. Lemibuzo ehlukahlukene isenza sikwazi ukuqonda amakhasimende ethu okucinga ngokuziphatha kanye nenhloso yabo. Ake sihlolisise ngalezi zinhlobo zemibuzo yenjini yokusesha.
Imibuzo emithathu yeminjini yosesho
uhlobo lombuzo uma umsebenzisi eyazi ukuthi hlobo luni lomthombo angathanda ukukuthola. Uvele ufake i-website ethize ye-URL ebhokisini lokusesha futhi uthola umphumela ohambisanayo. Imibuzo efanele ye-navigation inezinhloso ezicacile futhi uma isayithi lakho lingekho engqondweni yomsebenzisi, isayithi lakho ngeke libonwe.
Kungaba nzima ukudala isu ngaloluhlobo lombuzo. Kodwa-ke, uma ugxila ekuthuthukiseni ukuqashelwa kwegama lakho, uphinda kabili amathuba akho. Inani elivamile lemiphumela evele ekhasini lokuqala le-Google SERP uma lifika kumbuzo wokuhamba kuyisikhombisa. I-Google ithathe lesi sinyathelo njengoba kubonakala singenalutho ukubonisa imiphumela engaphezu kwesikhombisa uma abasebenzisi emazweni amaningi behlala emphumela we-TOP owodwa. Kodwa-ke, ezinye imibuzo ezivela ku-navigation zingase zingafani nalolu hlobo. Isibonelo, akubona bonke abasebenzisi abafuna umbuzo "we-Instagram" badinga ukuthola lolu hlelo lokusebenza lwe-multimedia. Abanye babo bangathanda ukufunda izihloko ezithile ezihlobene noma ulwazi olumayelana nezilungiselelo ezithile ze-Instagram noma izibuyekezo. Yingakho kudingeka uqiniseke ukuthi unombuzo ohamba phambili ohambahambayo ovela kokubili imiphumela ekhokhelweyo kanye nemiphumela ephilayo.
Umbuzo wolwazi uma umsebenzisi efuna ukuthola impendulo yombuzo wakhe noma ukuxazulula inkinga. Akunandaba ngaye ukuthi uzobhekana nesiphi isayithi. Kukhona imfuneko kuphela yokuthi lo mthombo web uzobe uhambisana nombuzo wakhe. Umbuzo wokwaziswa ukusabalalisa okubanzi kakhulu futhi okusetshenziselwa abasebenzisi abajwayelekile. Inhloso eyinhloko yokwenza injini yokusesha ukuheha abasebenzisi abafuna okuqukethwe kwekhwalithi ngosizo lwemibuzo yolwazi. Uma unokuqukethwe okuyingqayizivele nokubandakanya kwe-SEO engasiza abasebenzisi ukuxazulula izinkinga zabo, cishe kungenzeka ukuthi iwebhusayithi yakho izothola eziningi zezimoto ezihamba phambili ezingaguqukela ekuthengiseni. Kunzima ukuthola inzuzo emininingwaneni yolwazi njengezikhundla zokuqala ze-SERP, kulokhu, ngokuvamile kuvame izimpendulo zeGoogle Knowledge Graph nezihloko ze-Wikipedia. Noma kunjalo, abasebenzisi abaningi bangathanda ukuthola ulwazi olujulile ngesihloko. Yithuba lakho lokuphakamisa izinga lakho lokuchofoza-nokuguqulwa. Ukushayela ithrafikhi kumthombo wakho wewebhu, ungasebenzisa okuthunyelwe kwebhulogi ngolwazi lwekhwalithi kanye namathiphu. Ngaphezu kwalokho, kuwukuhlakanipha ukubhala izinkomba ezizenzekelayo nezinyathelo ezicacile.
Umbuzo wokuthengiselana uma umsebenzisi angathanda ukuthenga. Kuzwakala sengathi "ukuthenga okuthile" noma "ukuhlela okuthile. "Ngaphezu kwalokho, imibuzo ephathelene nomthengi ingabandakanya amagama asemthethweni njenge" amadivayisi we-Apple "noma" ama-smartphones e-Samsung. Usesho oluningi lwendawo olufana nalokhu "indawo yokudlela yase-Asia eliseduzane" e-Chicago ". Umbuzo wokuthengiselana uyinzuzo enkulu ekutholeni umbuzo owenza abathengisi be-intanethi baqoqe imali ku-intanethi. Ukuze uthole i-ROI ephezulu, abanikazi bewebhu babhekisela ekusebenziseni injini yokusesha nokukhangisa ngokuchofoza ngakunye Source .